Maraykanka oo sheegay inuu kordhinayo la dagaalanka Alshabaab iyo gurmadka abaaraha Soomaaliya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Maraykanka oo sheegay inuu kordhinayo la dagaalanka Alshabaab iyo gurmadka abaaraha Soomaaliya
Maraykanka oo sheegay inuu kordhinayo la dagaalanka Alshabaab iyo gurmadka abaaraha Soomaaliya
Maraykanka ayaa kordhinaya dadaallada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya, sida ay sheegtay kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Siyaasadda Victoria Nuland oo la kulantay Madaxweyne Xasan Sheekh.
Dhinaca kale, Iyadoo Soomaaliya ay wajaheyso abaaro ba’an iyo cunno la’aan, ayaa ku xigeenka xoghayaha Nuland, waxay ku dhawaaqday in Maraykanka uu ku yaboohay lacag loogu talagalay Soomaaliya taas oo qayb ka ah qiyaastii $105 milyan oo gargaar bani’aadamnimo oo cusub oo loogu talagalay Geeska Afrika.
Victoria Nuland ayaa yabooha gargaarkan kaga dhawaaqday kulan ay la qaadatay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ka hortagga abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Hay’adaha Cuntada iyo Beeraha iyo UNICEF.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa uga mahadceliyey dowladda Maraykanka taageerada ay ku bixiyaan Soomaaliya, isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee kala dhaxeeya Maraykanka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisa ay xoogga saareyso gurmadka abaaraha, maalgashiga, deyn cafiska iyo xoojinta xiriirka caalamka.
Previous articleMadaxweynaha DG Puntland oo maanta kulan la yeeshay Safiirka Dowladda Mareynka.
Next articleKenya oo ku jirta qaban qaabada heshiis ay Soomaaliya xayiraada uga qaadayso Qaadka Miirowga